Cilmibaare soomaali ah: Corona-virus ayaa igu dhacay, waana ka caafimaaday. - NorSom News
Cilmibaare soomaali ah: Corona-virus ayaa igu dhacay, waana ka caafimaaday.
Si aad ula socoto wararka, warbixinada iyo talooyinka NorSom News oo muuqaal ah, Halkan riix(Subcribe/Abonner)
Wuxuuna sharraxay sidii uu uga caafimaaday Coronavirus, isagoo wareysi siinayay laanta Afsoomaaliga ee BBC-da.
Daawo miyaad qaadatay, sideed uga soo caafimaaday?:
Halkan ka daawo wareysiga wiil soomaali uu xanuunka uu ku dhacay oo ka waramaya calaamadaha.
Previous articleSweden: 6 kamid ah 15-ka qof ee Corona-virus u dhintay, waa soomaali.
Next articleDaawo: Dhaqanka ay Talyaanigu soomaalida la wadaagaan, ayuu cudurku ugu faafay.